စိတ်ဖိစိးမှု ခံစားနေရတာကိုယ်တစ်ယောက်တည်းလား – Live the Dream
ဆောင်းပါးများ ,ဘဝ ,အလုပ်
စိတ်ဖိစီးမှုတွေက လူတိုင်းတွေ့ကြုံခံစားရမယ့်အရာတစ်ခုပါပဲ။ အလုပ်များများလုပ်နေရလို့ စာတွေအများကြီး ကျက်ရလို့ စိတ်ဖိစီးလာပြီးဆို အလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျောင်းမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပျော်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ ပျော်ရွှင်မှုမရှိရင်တော့ လူတွေအများစုက စိတ်ထွက်ပေါက်ရှာ ကြတယ်။ ကောင်းတဲ့နေရာမှာ ထွက်ပေါက်ရှာရင်တော့ ဘာမှ မဖြစ်ပေမဲ့ မကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာ စိတ်ထွက်ပေါက်ရှာလို့ ပျက်စီးသွားတဲ့သူတွေက ဒုနဲ့ဒေးပဲလေ ကျောင်းသားတွေ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ကိုယ့်ကိုကို သတ်သေတာတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေများလို့ အရက်သောက်ရင်းနဲ့ အရက်သမားလုံးလုံးဖြစ်သွားတာတွေ လက်ချိုးမရေနိုင်အောင်ပါပဲ။
ဒါကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေကရောက်မလာခင် ရှောင်တိမ်းရပါမယ်။ ရှောင်နိုင်မှ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်မှာပေါ့။ အလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပညာရေးလိုက်စားနေတာပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်နေရင် အောင်မြင်မှုတွေက ဆီးကြိုနေမှာပါ။ ကဲ့ ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? ဘယ်လောက်ပဲ အလုပ်များနေပါစေ၊ ကျောင်းစာ ကျူရှင်စာ သင်တန်းကစာတွေ လုပ်စရာအများကြီးရှိနေပေမဲ့ အောက်ပါအချက်အတိုင်းနေမယ်ဆိုရင် စိတ်ဖိစီးမှုမရပဲ အဆင်မပြေမှုတွေအသာလေးကျော်လွှားနိုင်မှာပါနော်။
ဘယ်လောက်ပဲအလုပ်တွေများနေပါစေ အချိန်မှန်မှန်စားဖို့ လိုပါတယ်။ နံနက်အတွက်လိုအပ်တဲ့ အစာအဟာရကို နံနက်အချိန်မှာမစားရင် တစ်နေ့တာအစမှာတင် ပင်ပန်းပြီး တစ်နေ့လုံး အဆင်မပြေ ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။ အဲ့လိုပဲ နေ့လည်စာ အချိန်မမှန်လို့ အစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရောဂါတွေရလာနိုင်သလို ညစာနောက်ကျမှစားပြန်ရင်လည်း ကျန်းမာရေးအရ ဆိုးကျိုးတွေ အများကြီးရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဆေးရုံဆေးခန်းတွေရောက် ၊ အလုပ်တွေပျက်ပြီး သောကတွေမဝေချင်ဘူးဆိုရင်တော့ အချိန်မှန်မှန်စားသင့်ပါတယ်နော်။
ညဘက်အချိန်မှန်မှန်အိပ်ပြီး မနက်ကျလန်းလန်းဆန်းနဲ့ သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်မှ ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်ခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ရဲ့သင်ယူမှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ် အောင်မြင်မှုတွေရလာမှာပါ။ ညဘက်တွေကျအိပ်မရ၊ မနက်ကျတော့လည်းမထနိုင် အဲ့လိုနဲ့ လုပ်ရမယ့် အရာတွေလည်းလုပ်မပြီးဘူး ဆိုရင်တော့ သောကလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ရမှာပေါ့။ ညဘက် Game ဆော့တာ၊ Movie ကြည့်တာလေးတွေလျှော့ပြီး အချိန်မှန်မှန်လေးအိပ်ယာဝင်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ပညာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်အလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်နိုင်မှာပါ။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပုံမှန် ပြုလုပ်တဲ့သူ တစ်ယောက်ရဲ့တစ်နေ့တာဟာ လန်းဆန်းတက်ကြွပြီး အားကျဖွယ်ရာ မြင်တွေ့ ရမှာပါ။ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလှုပ်ရှားခြင်းက သွေးတွင်းအဆီပါဝင်မှုလျှော့ကျစေတယ်။ သွေးဖိအားကိုလျှော့ကျစေတယ်၊ အရိုးနဲ့ ကြွက်သားကို ဖွံဖြိုးသန်မာစေတယ် စတဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးများအများရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဆိုးမြင်စိတ်ဓါတ်များကိုတားဆီးပေးခြင်း၊ စိတ်ပူပန်မှုများကိုလျှော့ချပေးခြင်း၊ လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာခြင်း၊ တက်ကြွလန်းဆန်းခြင်း စတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။တက်ကြွရွှင်လန်းတဲ့လူတစ်ယောက်က စိတ်ဖိစီးမှုတွေမရှိပဲ အောင်မြင်မှုတွေကဆီးကြိုနေမှာပါ။
ဟိုကောင်က ဒီလို၊ ဟိုမိန်းကလေးက အဲ့လိုအစားမျိုးဟဲ့……လို့ တစ်စုံတစ်ယောက်က လာပြောနေရင်တော့ ပြေးသာပြေးပေတော့ ။ တကယ့်ချီးထုပ်ကြီးတွေပါ… သူတို့ကပြောကောင်းတိုင်းပြောနေပေမယ့်… ကိုယ့်ဘက်ကအဲ့တာတွေလိုက်နားထောင်ပြီး သောကတွေမပွားချင်ပါနဲ့။ ပြေးနိုင်သမျှဝေးဝေးပြေးပြီး ရှောင်နေလိုက်ပါ။
၅။ လိုနေတာ ဖြည့်ဦး
အလုပ်တွေပဲ ဇွတ်လုပ်ပြီး ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်တောင်ပြန်မကြည့်နိုင်ရင်တော့ ကိုယ့်ပဲ စိတ်ဖိစီးရမှာပါ။ ကိုယ်ရဲ့စိတ်အပန်းပြေဖို့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့လိုနေလား၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ခရီးသွားဖို့လိုနေလား၊ အိမ်မှာပဲ စာအုပ်လေးနဲ့ အေးဆေးနှပ်ဖို့လိုနေလား ကိုယ့်ကိုကို ကိုယ်သိသင့်ပါတယ်။ စိတ်တွေမနွမ်းလျခင် လိုအပ်တဲ့အရာတွေကို ဖြည့်လိုက်ပါဦး။ ရိက္ခာမရှိပဲ ခရီးဆက်သွားနေရင်တော့ လမ်းတစ်ဝက်မှာပဲ ဒုက္ခရောက်မှာသေချာပါတယ်။
အတွေးဆိုတာ မတွေးရင်လည်း ဒုက္ခရောက်နိုင်သလို အရမ်းတွေးလွန်းရင်လည်း သုခ ခံစားရမယ်မထင်ပါနဲ့။ သေးသေးလေးတွေးပြီး များများလုပ်လိုက်တာက အကြီးကြီးတွေးပြီး ဘာမှမလုပ်ပဲနေတာထက်တော့ပိုကောင်းပါတယ်။ အဲလိုပါပဲ စိတ်ညစ်မှုတွေကိုလည်း ထပ်ခါထပ်ခါတွေးပြီး စိတ်ဆင်းရဲမခံပါနဲ့။ ဟာသတစ်ခုကိုတောင် ထပ်ခါထပ်ခါ ပြောနေရင် ရယ်စရာမကောင်း တော့တာ ဘာလို့ စိတ်သောကခံပြီး အများကြီးလျှောက်တွေးနေမှာလဲ?
၇။ ကျေနပ်ပါ… ရောင့်ရဲတင်းတိမ်ပါ…
ကိုယ်ဖုန်းက အကောင်းစားမဟုတ်သော်လည်း Internet ကောင်းကောင်းသုံးနိုင်တယ်။ ကင်မရာလည်းအဆိုးကြီးမဟုတ်ပါဘူး အဲ့လို အကောင်းမြင်စိတ်လေးနဲ့အသက်ရှင်ရတာ ဘဝက ပိုပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်မပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အရာတွေ အတွက် အော်ငါ့ဘဝကလည်းဆိုပြီး ငြီးငြူနေရင်တော့ ကိုယ့်အနားရှိတဲ့ ပန်းလေးတွေ မွှေးတယ်လို့တောင် ခံစားပျော်ရွှင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အရာလေးနဲ့ ရောင့်ရဲနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်သောကမရောက်ရတော့ဘူးပေါ့